မီးပြတိုက်: December 2008
Posted by SLIP in Woman
Sure God created man before woman. But then you always makearough draft before the final masterpiece. (Author Unknown)
Women like silent men. They think they're listening. (Marcel Achard)
A woman, the more careful she is about her face, is commonly the more careless about her house. (Ben Jonson)
You don't loveawoman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her. (Author Unknown)
How meawoman who doesn't feel guilt and I'll show youaman. (Erica Jong)
A beautiful woman who is pleasing to men is good only for frightening fish when she falls into the water. (Zen proverb)
There are three things men can do with women: love them, suffer for them, or turn them into literature. (Stephen Stills)
Once uponatimeaman dragged his father from their house and as they reachedatree his father cried "Stop! I did not drag my own father past this tree!" (Gertrude Stein)
A successful woman preacher was once asked "what special obstacles have you met asawoman in the ministry?" "Not one," she answered, "except the lack ofaminister's wife. (Author Unknown)
The history of all times and of today especially, teaches that ... women will be forgotten if they forget to think about themselves. (Author Unknown)
The great question that has never been answered, and which I have not yet been able to answer, despite my thirty years of research into the feminine soul, is “What doesawoman want?” (SIGMUND FREUD)
Whenaman talks dirty toawoman, its sexual harassment. Whenawoman talks dirty toaman, it's $3.95aminute. (Author Unknown)
I askedaBurmese why women, after centuries of following their men, now walk ahead. He said there were many unexploded land mines since the war. (Robert Mueller)
The average woman would rather have beauty than brains, because the average man can see better than he can think. (Author Unknown)
Women cannot complain about men anymore until they start getting better taste in them. (Bill Maher)
Every girl should use what Mother Nature gave her before Father Time takes it away. (Laurence J. Peter)
I am woman! I am invincible! I am pooped! (Author Unknown)
Many beautiful women have been made happy by their own beauty, but no intelligent woman has ever been made happy by her own intelligence. (Mignon McLaughlin)
Women should be tough, tender, laugh as much as possible, and live long lives. The struggle for equality continues unabated, and the woman warrior who is armed with wit and courage will be among the first to celebrate victory. (Maya Angelou)
Every woman should haveapurse of her own. (Susan B. Anthony)
If you are ever in doubt as to whether to kissapretty girl, always give her the benefit of the doubt. (Thomas Carlyle)
No matter how happilyawoman may be married, it always pleases her to discover that there isanice man who wishes that she were not. (H.L. Mencken)
ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလူ ဆိုသည်မှာ တည်ကြည်ခိုင်ခံ့သည့် ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေး တစ်သမက်တည်း ပေးနိုင်သူသာ ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းကို မိမိသာ ဖန်တီးနိုင်သည်။
လူတစ်ယောက်၏ ဘ၀တွင် မိမိ ကိုယ်တိုင်အပေါ် ထားရှိသည့် အထင်အမြင်သည် အလွန် အရေးကြီး၏။ သင့်ကိုယ်သင် မည်သို့ ထင်မြင်ထား သနည်း။ မည်သို့ ဖြစ်မည်ဟု ထင်မြင်ထား သနည်း။ ရေရှည်တွင် လူတိုင်း လူတိုင်း မိမိ ထင်မြင် ထားသည့်အတိုင်း တကယ် ဖြစ်လာရခြင်းမှာ ထုံးစံဖြစ်သည်။ အလကားကောင် ဟု ထင်မြင်ထားလျှင် အလကားကောင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဧရာမပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရမည်ဟု ယုံကြည်ထားလျှင် တစ်နေ့ မုချ ဧရာမပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးထားပါ။ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ဦးတည်ပါ။ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်ခဲ့သူ အားလုံးသည် တစ်ခုတည်းသော ဦးတည်ချက်၌ မိမိ စွမ်းအားမှန်သမျှကို ပုံအော စိုက်ထုတ်ခဲ့ကြ သူများသာ ဖြစ်ကြသည်။
မိမိကိုယ်ကို မကဲ့ရဲ့ မရှုပ်ချနှင့်။ မိမိကိုယ်ကို မလေးစားသူအား မည်သူကမျှ လေးစားလိမ့်မည်မဟုတ်။
မိမိကိုယ်ကို လေးစားခြင်းသည် အောင်မြင်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
လောကတွင် ထူးခြား ကြီးကြယ်သော အောင်မြင်မှု မှန်သမျှ ထက်သန်ပြင်းပြသော စိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မှ ရနိုင်၏။
လူအများစုတို့မှာ မအောင်မြင်မှာ ကြောက်စိတ်ကြောင့် အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးမှန်သမျှကို ရှောင်ကြ၏။ မအောင်မြင်မှုကို ရှောင်သောအခါ အောင်မြင်မှု နှင့်လည်း ကင်းဝေးရလေသည်။
အကြီးကျယ်ဆုံး ထမြောက်အောင်မြင်မှု တစ်ရပ်သည် အစ ပထမ၌ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်သာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိမ်းရွက်တွေ ဝေလျှက်ရှိသည့် ပညောင်ပင်ကြီးသည် တစ်ချိန်က ညောင်စေ့ ကလေးထဲတွင် အိပ်စက် နေခဲ့ဖူးသည်။ ကောင်းကင်ပြင်တွင် လွတ်လပ်စွာ ပျံဝဲနေသော သိမ်းစွန်ရဲသည် ဥခွံငယ်အတွင်းမှ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရဖူးသည်။ ထို့အတူ ကမ္ဘာလောကအလယ် ထည်ဝါခံ့ညားစွာ ရပ်တည်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ် မှန်သမျှသည်လည်း တစ်ချိန်သော အခါကမူ မထင်မရှားသော ရုပ်သွင်ဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့ကြဖူးသည်။
သင်သည် ပထမတစ်ကြိမ် လက်မြှောက် နောက်ဆုတ်ခဲ့ပါက ဒုတိယအကြိမ်၊ တတိယအကြိမ်များတွင် လက်မြှောက်နောက်ဆုတ်ရန် ပို၍ပို၍ လွယ်ကူလာတတ်သည်။ ကြာသော် အလွယ်တကူ နောက်ဆုတ် အရှုံးပေးခြင်းသည်ပင် သင်၏ အကျင့်၊ သင်၏ ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်လာပေသည်။
စွန်ဆိုသည်မှာ စုန်လေတွင်မတက်၊ လေကို ဆန်ရင်းသာ အမြင့်သို့ တက်စမြဲဖြစ်သည်။
မီးဒဏ်၊ ရေဒဏ်၊ တူဒဏ်ကို ခံပြီးမှ အသားကောင်းသော ဓားတစ်ချောင်းဖြစ်မည်။ ကျောက်သားကောင်းကောင်းမှာ နာနားသွေးပြီးမှ အသွားထက်သော ဓားတစ်လက်ဖြစ်မည်။
စ ထားသည့် ကိစ္စတစ်ခုကို ပြီးပြတ်အောင် လုပ်ပါ။ သေးသည့်အလုပ်ဖြစ်စေ၊ ကြီးသည့်အလုပ်ဖြစ်စေ တန်းလန်း မထားပါနှင့်။
သင်တည်ဆောက်နိုင်သမျှ အတောင့်တင်း အခိုင်မာဆုံး သေတ္တာကြီးတစ်လုံး တည်ဆောက်ပါ။ ပြီးစီးသည့်အခါ သင့်အအောင်မြင်မှုများ၊ သင့်ဒုက္ခနှင့် သင့်သောကများ၊ သင့်ကိုယ်သင် အဖန်တလဲလဲ ဂရုဏာသက်နေမှုများအားလုံးကို သေတ္တာကြီးထဲထည့် သောခတ်ပိတ်ပြီးလျှင် သေတ္တာ အဖုံးပေါ်ထိုင်ကာ အားရပါးရ ရယ်မောလိုက်ပါ။
ပူဆွေးသောကငှက်များ သင့်ခေါင်းပေါ်က ဖြတ်သန်းပျံသွားခြင်းကို သင် တားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ အသိုက်ဆောက် အခြေချမနေအောင်ကား သင်တားဆီးနိုင်ပါသည်။
အောင်မြင်သောအခါ မိမိရင်ဘတ်ကို ပုတ်ပြပြီး အမှားအယွင်း ကြုံချိန်၌ ဘေးဘီသို့ လက်ညှိုး ထိုးတတ်ခြင်းသည် ရင့်ကျက်မှုနည်းသော၊ ကလေးစိတ် မပျောက်သေးသောသူတို့၏ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
ယနေ့စဉ်းစားပါ၊ မနက်ဖြန်မှ ပြောပါ။
ငါမရှိလျှင်မဖြစ်ဟု သင့်ကိုယ်သင် ထင်နေမိတတ်ပါသလား။ သုသာန်သို့ ရောက်ချိန်တွင် သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူပေါ်ရှိ ကမ္ပည်း ကျောက်စာများကို ဖတ်ရှုကြည့်ပါ…။
လူတစ်ယောက်၏ အတွေးကို သူဘာတွေတွေးနေသည် ပြောသဖြင့် မသိရ၊ သူ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ အားဖြင့်သာ သိရ၏။
လျှာဟူသည် သုံးလက်မမျှသာရှည်၏။ သို့သော် ခြောက်ပေရှည်သော လူတစ်ယောက်ကို သေစေနိုင်သည်။
ပညာရှိ၏ နှုတ်ခမ်းသည် နှလုံးသားထဲတွင် ကိန်းအောင်း၏။ သူမိုက်၏ နှလုံးသားကား သူ့နှုတ်ဖျားမှာပင် တည်ချေသည်။
သြဇာပေးမည့်သူကို မည်သူမျှအလိုမရှိ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုကား လူတိုင်းအလိုရှိကြ၏။
စိုက်သောအပင်၏ အသီးကို သင်စားရလိမ့်မည်။ သူတပါးအား စေတနာထားဆက်ဆံလျှင် စေတနာကို ပြန်ရမည်။ သူတစ်ပါးအား အာဃတထားဆက်ဆံလျှင် အာဃာတဖြင့် တုန့်ပြန်ခြင်းသာ ခံရမည်။
စာဖတ်ပါ။ သင့်ကုတ်အင်္ကျီအိပ်ကို ခရီးဆောင် စာကြည့်တိုက်အဖြစ် အသုံးပြုပါ။